Global Voices teny Malagasy » Atleta Rosiana Voamarika ho “Mpamadika” Noho Ny Fandraisany Anjara Amin’ny Lalao Olaimpika Any Rio · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Jolay 2016 10:47 GMT 1	 · Mpanoratra Fabrice Deprez Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanatanjahantena, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet, Lalao Olaimpika
Niteraka adihevitra mafana tao amin'ny aterineto rosiana sy tamin'ny fampitam-baovao miompana amin'ny fanontaniana hoe “mamadika” sa tsia ny fireneny nahaterahany ve i Klishina izay fanambarana izany. Ny tena niteraka tsikera indrindra dia ny fisaoran'i  Klishina ny Federasionan'ny Atletisma Iraisampirenena (izay nitsipaka ireo atleta rosiana hafa rehetra) tao amin'ny sata Facebook iray ny fandraisany anjara amin'ny Olaimpika.
Haingana ny nanatsongan'ny  famoahana iray Pro-Kremlin Life (Life News teo aloha) ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny lahatsoratr'i Klishina. Na dia maro kokoa amin'ireo fanehoan-kevitra aza no mirona kokoa ho amin'ny fanohanana, nifidy ny hanasongadina ireo mitsikera indrindra ilay atleta kosa ny Life, izay misy mpisera iray manontany hoe nahoana no olona iray miaina any Etazonia “mihevitra ny tenany ho atleta rosiana.”
Tamin'ny antsafa  iray tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Federasionan'ny Atletisma Rosiana, no niarovan'i Klishina tena, tamin'ny filazany fa efa nizatra tena tao Etazonia telo taona izy izao. “Tsy mety, araka ny fiheverako, ny manopa ahy sy ny miantso ahy ho mpamadika,” hoy izy.
Tsy miiba avokoa tsy akory ny setriny: nilaza i Tatyana Lebedeva, atleta teo aloha sady mipetraka ao amin'ny Vaomieran'ny Federasionan'ny atletisma fa manonana tanteraka ny fanapahan-kevitr'i Klishina, araka ny famoaham-baovao rosiana Sport Express . “Raha mandray anjara eo ambany faneva tsy miloko izy dia manana ny zo hanao izany,” hoy i Lebedeva, ary nampiany hoe “fantatsika rehetra fa Rosiana i Dasha.” tamin'ny fitsapan-kevitra tsy mahasolotena iray , navoakan'ny famoaham-baovao rosiana Gazeta.ru sy novalian'olona mihoatra ny 8000, 66% tamin'ny namaly no nilaza fa “tsy mpamadika” i Darya Klishina.”
Niteraka fanangonan-tsonia  handravana ny ekipa ny faharesen'ny ekipam-pirenena amin'ny baolina fandaka nandritra ny fiadiana ny Euro 2016, roa taona mialoha ny Mondialy izay hotontosaina ao Rosia. Niantsafa  tamin'ny mpanangana ny fanangona-tsonia (izay efa nahangona sonia mihoatra ny 800.000) ny Gazeta.ru, tao no nandrenesana fa tokony horavana ny ekipa satria nampiseho “tsy fahampiana fitiavan-tanindrazana” ny mpilalao.
Ohatra iray vao haingana ihany koa ny tantaran'ireo mozisiana rosiana izay nandray anjara tamin'ny fetiben'ny mozika tany Letonia. Niteraka tadion-tserasera ny fandraisan'izy ireo anjara rehefa niampanga azy ireo ho “mpamadika i Ilya Reznik, Sovietika 78 taona sady poeta Rosiana. “Io tsy fananana fotokevitra sy fitiavan-kahazo vola io no mitarika ireny “famadihana madinidinika” ireny”, hoy i Reznik tamin'ny seha-baovao Life . Tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Komsomolskaya Pravda no nanavazavany ny heviny :
Ny fanatanjahatena rosiana [irery] ihany anefa no ahitana ny fifanenjanana. Nanambara  ny mpitondratenin'i Kremlin, Dmitry Peskov, fa tsy hanao ankivy ny lalao olaimpika i Rosia, saingy nampirisihany koa ny atleta “hampiasa ny fitaovana ara-dalàna rehetra eo am-pelatanany” hiadiana amin'ilay didy fandrarana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/25/85339/
 fitsapan-kevitra tsy mahasolotena iray: http://www.gazeta.ru/comments/2016/07/11_a_9528161.shtml
 Reznik tamin'ny seha-baovao Life: https://life.ru/t/%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0/873424/ilia_rieznik_obiavil_priedatieliami_zviezd_priiekhavshikh_v_iurmalu_na_fiestival_vaikulie
 nanavazavany ny heviny: http://www.kp.ru/daily/26550/3567697/